DJ သမားစစ်သွေးကြွ - Djs, Vjs များအတွက် Nye နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ, နိုက်ကလပ် 2019
, preview ဖို့ပုဒ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါသင်ကြိုက်နှစ်သက်ထို့နောက်သူတို့, သင်၏ဝယ်ယူမှုကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုထည့်သွင်းဖို့လှည်းအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
(* လှည်းအိုင်ကွန်အောက်က SoundCloud header ကို၌ရှိ၏)
သင် DJ သင်လိုချင်တာကို drop ဝယ်ယူရန်ပြီးတာနဲ့သူကအဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည် ချက်ချင်းကို download။ 2018 ဘို့အားလုံးအသစ်က!
အနည်းငယ်ဝယ်ယူသို့မဟုတ်သူတို့ကိုမဝယ် အားလုံး အပိုအပိုဆုသီချင်းများနှင့်အတူကြွလာတော်မူသောတစ်ဦးလျှော့စျေးမှာ!
TRACK lists - 106 Drop